Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta Ee Laga Qoray: Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Ben White, Sergio Ramos Iyo Ousmane Dembele
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta ee laga qoray: Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Ben White, Sergio Ramos iyo Ousmane Dembele
April 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 9 April
West Ham ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee amaahda ugu ciyaara Granada Yangel Herrera, sida laga soo xigtay Todofichajes.
Leeds ayaa soo gashay loolanka loogu jiro saxiixa Sergio Aguero oo beeca xorta ah xagaagan, sida laga soo xigtay 90Min.
Kylian Mbappe ayaa sii wada inuu iska caabiyo saxiixiisa heshiis cusub ee Paris Saint-Germain, taasoo mustaqbalkiisa dheer ee kooxda shaki galineysa – The Telegraph
Edinson Cavani ayaa “uga sii dhawaanaya sidii hore” inuu ku biiro Boca Juniors isagoo ka tagaya Manchester United xagaagan, sida laga soo xigtay ESPN .
Brighton ayaa kalsooni ku qabta in xiisaha kooxaha Liverpool iyo Manchester United ee Ben White laga hor istaagi karo. Brighton iyo Hove Independent a
Weeraryahanka Juventus Dejan Kulusevski ayaa ku soo laabtay diirada u saaran Manchester United, sida ay qortay Calciomercato.
Qeybta hore suuqa kala iibsiga 9 April
Real Madrid waa inay sameysaa wax walba oo ay ku ceshan karto Sergio Ramos kooxda, sida uu sheegayo laacibkoodii hore ee khadka dhexe Hamit Altintop. Goal
Fiorentina ayaa hoos u dhigtay qiimaha ay ku dooneysay daafaca lala xiriirinayo Manchester United Nikola Milenkovic – sida laga soo xigtay Gazzetta Dello Sport .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Betis Sergio Canales ayaa xiiseynaya Atletico Madrid – sida laga soo xigtay Fichajes .
Ousmane Dembele ayaa ku haboon Liverpool, sida laga soo xigtay John Barnes, oo Reds ku booriyay inay lasoo saxiixdaan garabka Barcelona xagaagan. BonusCodeBets
Ousmane Dembele ayaa diyaar u ah inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Barcelona ka dib markii uu ku qanciyay inuu sii joogo tababare Ronald Koeman, sida ay qortay jariirada Marca .
Manchester United, Tottenham iyo Leicester ayaa xiiseynaya daafaca amaahda ugu ciyaara kooxda Fulham Joachim Andersen, sida ay qortay Telegraph.
Jorginho “wuxuu doonayaa inuu ku laabto Italy”, sida laga soo xigtay wakiilkiisa Joao Santos, kaasoo sheegay in xiddiga Chelsea uu xiiseynayo Juventus, Inter iyo Milan. Radio Kiss Kiss
Chelsea ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Sevilla Jules Kounde – sida ay qortay La Corniva De Nervion .
Borussia Dortmund ayaa ka nasaneysa xiisaha suuqa kala iibsiga ee Erling Haaland mana aysan dhigin waqtiga ugu dambeeya ee lagu go’aaminayo mustaqbalkiisa, ayuu yiri agaasimaha isboortiga Michael Zorc. Goal
Leeds ayaa qarka u saaran inay qandaraasyo cusub siiso Kalvin Phillips iyo Patrick Bamford, sida ay warinayso The Telegraph.